Usoro Skype: igwe okwu na
Iji kwurịta okwu na Skype na ụdị ọ bụla ọzọ karịa ederede, ịchọrọ igwe okwu. Enweghị igwe okwu, ịnweghị ike ịkpọ ma ọ bụ na oku oku, ma ọ bụ na oku vidiyo, ma ọ bụ n'oge ogbako n'etiti ọtụtụ ndị ọrụ. Ka anyị chọpụta otu esi agbanye igwe okwu na Skype, ọ bụrụ na agbanyụrịrị ya. Njikọ otu microphone Iji mee ka microphone dị na Skype, ị ga-ebu ụzọ jikọọ ya na kọmpụta, ọ gwụla ma ọ bụ na ị na-eji laptọọpụ na igwe eji eme ihe.
Usoro Skype: arụmọrụ omume
Oge kachasị emenye ihere mgbe ị na-arụ ọrụ ọ bụla na-eji data nkeonwe eme ihe site na ndị na-agba ọsọ. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịdaba ọ bụghị naanị ozi nzuzo, mana ọ na-abanyekwa na akaụntụ ya, na ndepụta nke kọntaktị, ebe nchekwa nke ozi, na ihe ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, onye na-awakpo nwere ike ikwurịta okwu na ndị mmadụ abanyela na nchekwa data kọntaktị, na nnọchite onye ọrụ ahụ metụtara, rịọ maka ego, zipu spam.
Idochi mmadu na Skype
Emere Skype usoro iji welie ikike nke ndị mmadụ na-ekwurịta okwu n'Ịntanet. O di nwute, enwere ndi mmadu ndi gi na ha choghi ikwuputa okwu, ihe omume ha na-eme ka i ghara iji Skype mee ihe. Ma, n'ezie ndị dị otú ahụ enweghị ike egbochi? Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi egbochie mmadụ na usoro ihe omume Skype.
Ịmepụta ogbako na Skype
Ịrụ ọrụ na Skype abụghị naanị ụzọ abụọ na-ekwurịta okwu, kamakwa ịmepụta ọtụtụ nnọkọ ndị ọrụ. Mmemme nke usoro ihe a na-enye gị ohere ịhazi otu oku n'etiti otutu ndị ọrụ. Ka anyị chọpụta otu esi emepụta ogbako na Skype. Otu esi emepụta ogbako na Skype 8 na n'elu Mbụ, chọpụta algorithm maka ịmepụta ogbako na mbipute ozi nke Skype 8 na n'elu.
Lelee ozi ochie na Skype
Ọnọdụ dịgasị iche iche na-eme ka ị cheta, ma lee akwụkwọ ozi na Skype ogologo oge gara aga. Ma, ọ dị mwute, ọ bụghị ozi oge ochie ka a na-ahụ na mmemme ahụ. Ka anyị mụta otú e si ele ozi ochie na Skype. Ebee ka ozi ndị echekwara? Mbụ, ka anyị chọpụta ebe a na-echekwa ozi ahụ, n'ihi na n'ụzọ dị otú a, anyị ga-aghọta ebe ha kwesịrị isi na ya.
Skype abụghị naanị maka nkwurịta okwu vidiyo, ma ọ bụ ozi n'etiti ndị ọrụ abụọ, kamakwa maka ederede okwu na otu. A na-akpọ ụdị nkwurịta okwu a nkata. Ọ na-enye ohere ka ọtụtụ ndị ọrụ kwurịta ihe ngwọta nke nsogbu dị iche iche, ma ọ bụ dị nnọọ ụtọ ikwu okwu.
Izipu foto na Skype
Usoro ihe omume Skype enweghi ike ime nani olu na oku vidiyo, ma ọ bụ iji kwekọọ, kamakwa iji gbanwee faịlụ. Karịsịa, site n'enyemaka nke usoro ihe a, ị nwere ike izipu foto, ma ọ bụ kaadị ekele. Ka anyị hụ ụzọ ndị ị nwere ike isi mee ya na usoro zuru ezu maka PC, yana na nsụgharị ya.
Voice Independent: mmemme maka ịgụ ihe ederede
Ndewo! "Achịcha na-enye anụ ahụ aka, akwụkwọ ahụ na-enyekwa uche" ... Akwụkwọ bụ otu n'ime akụ kachasị ọnụ ahịa nke mmadụ oge a. Akwụkwọ pụtara n'oge ochie ma dị oke ọnụ (otu akwụkwọ nwere ike gbanwere maka ìgwè ehi!). Na oge a, akwụkwọ dị maka onye ọ bụla! Ịgụ ha, anyị na-aghọkwu ndị gụrụ akwụkwọ, na-emepe ihe ngosi, nkà.
Nsogbu nsogbu na-edozi: ezughị ezu iji chekwaa iwu na Skype
Usoro kọmputa ọ bụla nwere nsogbu ọrụ, Skype abụghịkwa otu. Ha nwere ike kpatara ma ọ bụrụ na ngwa ngwa nke ngwa ahụ n'onwe ya na ihe ndị ọzọ nwere onwe ha. Ka anyị chọpụta ihe bụ isi nke njehie dị na Skype "Enweghị ezu icheta iji mezie iwu", na otu esi edozi nsogbu a.
Otu esi ejikọ ekweisi na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ
N'isiokwu taa, anyị ga-eleba anya iji jikọọ ekweisi (gụnyere igwe okwu na ọkà okwu) na kọmputa na laptọọpụ. N'ozuzu, ihe niile dị mfe. N'ozuzu, nke a na-enye gị ohere ịgbasa ikike ịrụ ọrụ na kọmputa ahụ. Ọfọn, n'ezie, nke mbụ, i nwere ike ige egwú ma ghara igbochi onye ọ bụla; jiri Skype ma ọ bụ kụọ egwu na netwọk.
Skype bụ usoro nke oge maka nkwurịta okwu na Intanet. Ọ na-enye olu, ederede na nkwurịta okwu vidiyo, yana ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. N'etiti ngwaọrụ nke usoro ihe omume ahụ, ọ dị mkpa igosi oke ohere maka ijikwa kọntaktị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike igbochi onye ọrụ ọ bụla na Skype, ọ gaghị enwe ike ịkpọtụrụ gị site n'usoro ihe omume a n'ụzọ ọ bụla.
Okwu Skype: ngwaọrụ nyocha ụda
Otu n'ime isi ọrụ nke usoro ihe omume Skype bụ ngere na nkwekọrịta vidiyo. Dị ka o kwesịrị ịdị, nkwurịta okwu dị otú ahụ na-enweghị ihe ndekọ ụda nke ọma, ya bụ, microphone, agaghị ekwe omume. Ma, ọ dị mwute ikwu na, mgbe ụfọdụ, ndekọ ngwaọrụ anaghị ada. Ka anyị chọpụta ihe bụ nsogbu na mkparịta ụka nke ihe ndekọ ụda na Skype, na otu esi edozi ha.
Ntak ị gaghị abanye na Skype
Ọ bụrụ na ị na-ezute njehie na-esonụ mgbe ị na-agbalị ịbanye na Skype: "Nbanye agaghị ekwe omume n'ihi nzaghachị ntinye data," echegbula. Ugbu a, anyị ga-ele anya iji dozie ya n'ụzọ zuru ezu. Idozi nsogbu site na ịbanye Skype. Usoro mbụ Iji mee omume ndị a, ịkwesịrị inwe "Nchịkwa" ikike.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla ọ dịkarịa ala site n'oge ruo n'oge rutere ọrụ nke iweghachite ịnweta otu akaụntụ. Ọtụtụ mgbe, a na-echefu data achọrọ maka ntinye, ma mgbe ụfọdụ, ndị na-asọ oyi nwere ike ịdọrọ ha ma ọ bụ buru ha. N'ikpeazụ, ihe kpatara nsogbu ahụ abụghị ihe dị mkpa, ihe bụ isi bụ iwepụ ya ngwa ngwa.
Usoro Skype: ọnọdụ nke data na akụkọ ihe mere eme nke ozi
N'ọnọdụ ụfọdụ, akụkọ ihe mere eme nke ozi, ma ọ bụ ọrụ ọrụ na Skype, ị ga-ele anya na ọ bụghị site na ngwa ngwa, kama site na faịlụ nke ha na-echekwa. Nke a bụ eziokwu karịsịa ma ọ bụrụ na a ehichapụwo data a site na ngwa ahụ maka ihe ụfọdụ, ma ọ bụ na a ga-echekwa ya mgbe ịbigharị sistemụ arụmọrụ.
Skype: njikọ ejiri. Ihe ị ga-eme
Ezi mgbede. Enweghi ihe ohuru di na blog n'oge di anya gara aga, ma ihe kpatara ya bu obere "ezumike" na "ochicho" nke komputa ulo. Ọ ga-amasị m ịkọrọ gị otu n'ime esemokwu ndị a na isiokwu a ... Ọ bụghị ihe nzuzo na ihe omume kachasị ewu ewu maka nkwurịta okwu na Intanet bụ Skype. Dịka omume na-egosi, ọbụna na usoro dị otú ahụ a ma ama, ụdị nkedo na mkpọka niile na-eme.
Gbanwee olu gị n'elu Skype
Ọ na-egosi na n'ime usoro Skype ị nwere ike ịgbanwe olu. N'ezie, otutu n'ime unu amaghi banyere ya. A na-eme nke a site n'enyemaka nke mmemme pụrụ iche na ebudatara iche iche, n'ihi na site na ndabara, ọrụ dị na Skype adịghị enye. Ka anyị lee otú ọrụ ntinye ndị dị otú ahụ na-esi arụ ọrụ nakwa otú ha si dị mma maka kọmputa.
Nsogbu Skype: igwefoto anaghị arụ ọrụ
Isi ihe dị na Skype bụ ndokwa nke vidiyo na-akpọ na mkpokọta weebụ. Nke a bụ kpọmkwem ihe na-eme ka ngwa a dị iche na ọtụtụ IP telephony na nzi ngwa ngwa ozi. Ma gịnị ka ị ga - eme ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ adịghị ahụ kamera arụnyere na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ?
Ezi ụbọchị. Ọ bụla laptọọpụ ọ bụla nwere ngwa igwefoto weebụ (oku Ịntanetị ka na-abawanyewanye kwa ụbọchị), mana ọ naghị arụ ọrụ na laptọọpụ ọ bụla ... N'eziokwu, kamera dị na laptọọpụ ahụ na-akwado ya mgbe niile (ọ bụrụ na i jiri gi ya ma o bughi). Ihe ọzọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ igwefoto adịghị arụ ọrụ - ya bụ, ọ dịghị agba.
Esi gbanwee olu na Skype iji Clownfish
Ngwurugwu Egwuregwu Clown na-eme ka ọ dị mfe ịgbanwe olu gị n'elu Skype. E kere ya n'ụzọ pụrụ iche ka ọ rụọ ọrụ na onye ahịa a iji kwurịta okwu. Ọ ga-ezuru gị ịmalite Clownfish, malite Skype, họrọ ụda a chọrọ ma mee oku - ị ga-ada ụda dị iche iche. Ka anyị lebakwuo anya iji gbanwee olu gị na igwe okwu site na iji Clownfish.